ကွန်ပျူတာနှေးကွေးပြေးသည်ကို ထောက်. အရာများ၏အကြောင်းရင်းများကိုရှာရန် - ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ - 2019
ကွန်ပျူတာနှေးကွေးပြေးသည်ကို ထောက်. အရာများ၏အကြောင်းရင်းများကိုရှာရန်
တစ်ခါတစ်ရံပင်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများသည်မဟုတ်ဘဲရုံအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ (ကွန်ပျူတာ "သင်" ... မဟုတ်ပါဘူးသောသူတို့ကိုအသုံးပြုသူဘာမျှမပြောပါရန်) တည်ငြိမ်ပြီးနှေးကွေးကွန်ပျူတာအလုပ်ရှာရန်။
ဤဆောင်းပါး၌ငါအလိုအလျှောက် mode မှာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာများ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း, စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေသည့်အဓိကပြဿနာများကိုထောက်ပြနိုင်ပါတယ်သောသူ့ဟာသူတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ utility ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါရဲ့ start ပါစေ ...
တရားဝင်။ Website: //www.resplendence.com/main
ယင်း utility ကို၏အမည်ကို "အဘယ်ကြောင့်ဤမျှနှေးကွေးဖြစ်ပါတယ် ... " အဖြစ် Russian သို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ မူအရ, က၎င်း၏အမည်ကိုမှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပြီး, ကွန်ပျူတာနှေးကွေးနိုင်သည့်များအတွက်အကြောင်းပြချက်နားလည်ပြီးတွေ့ရှိရန်ကူညီပေးသည်။ အခမဲ့ utility ကို Window 7, 8, 10 အပေါငျးတို့သခေတ်သစ်ဗားရှင်း (32/64 bits) အပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်, အသုံးပြုသူထံမှမဆိုအထူးကျွမ်းကျင်မှု (ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော PC ကိုအသုံးပြုသူများသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဆိုလိုသည်မှာနိုငျခဲ့) မလိုအပ်ပါ။
ယင်း utility ကို install လုပ်ပါနှင့်စတင်ပြီးနောက်, သငျသညျအောကျပါပုံတစ်ပုံနဲ့တူတစ်ခုခုမြင်ရပါလိမ့်မည် (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 1) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ program ကို WhySoSlow စနစ် v 0,96 ၏ 1. သုံးသပ်ခြင်း။
အဘယ်အရာကိုချက်ချင်းဒီ tool ထဲမှာစိတျစှဲ - ကကွန်ပျူတာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုအမြင်အာရုံကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ပါသည်: ချက်ချင်းရှိရာအစိမ်းရောင်တုတ်ကိုတွေ့မြင် - ကပြဿနာတစ်ခုရှိကိုဆိုလိုသည် - ရှိရာအနီရောင်ကအဆင်ပြေပါတယ်။
CPU ကိုမြန်နှုန်း - ပရိုမြန်နှုန်း (သင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, အဓိက parameters တွေကိုတဦး);
CPU ကိုအပူချိန် - ထို CPU ကိုအပူချိန်များလွန်းမြင့်မားသည်ဆိုပါက CPU ကိုအပူချိန် (အလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ - ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ကျယ်ပြန့်သည်အနှေးကွေးစတင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့အရင်ဆောင်းပါးနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရအကြံပြု :.
CPU ကို Load - CPU အသုံးပြုမှု (ယခုသင့်ရဲ့ Processor ကိုသင့်ရဲ့ PC ကိုအလေးအနက်ဘာမျှမ (ဥပမာ, ကဂိမ်းစတင် HD ကို-ရုပ်ရှင်မကစားကြဘူး, စတာတွေမပြုခဲ့အလုပ်များမဟုတ်ပါလျှင်များသောအားဖြင့်က 1% ကနေ 7-8 ဖို့နေကြပါတယ်တက်နေတဲ့ဘယ်လောက်ပြသ )) .;
kernel တုံ့ပြန်နိုင်မှု - သင်၏ Windows OS ကို kernel ကို၏ "တုံ့ပြန်မှု" (စည်းကမ်းအဖြစ်, ဒီနှုန်းကအမြဲတမ်းစံတစ်ခုဖြစ်သည်) ၏ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်၏
App ကိုတုံ့ပြန်နိုင်မှု - သင့် PC မှာ install လုပ်ထားကွဲပြားခြားနားသော applications များ၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်အကဲဖြတ်;
။ မှတ်ဉာဏ် Load - RAM ကို download, (သင် run ပို applications များ - ဒီနေ့ရဲ့အိမ်မှာလက်ပ်တော့ / PC ပေါ်မှာသူတို့အများသောအားဖြင့်လျော့နည်းရရှိနိုင်ပါသည် RAM ကိုနေ့စဉ်အလုပ်အတွက်မှတ်ဉာဏ်အနည်းဆုံး 4-8 GB အထိရှိသည်ဖို့အကြံပြုသည်, ဒီမှာကြောင်းအကြောင်းပိုမို:
hard Pagefaults - ဟာ့ဒ်ဝဲ Interrupt (ခေတ္တလျှင်,: program တစ်ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ RAM နဲ့ disk ထဲကပွနျလညျထူထောငျဖို့ကို PC ထဲမှာမသောစာမျက်နှာတောင်းဆိုသည့်အခါဖြစ်ပါသည်) ။
အဆင့်မြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် PC ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်
ဤအကိန်းဂဏန်းများမဟုတ်သင်၏ system ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လုံလောက်တဲ့အသေးစိတ် (devices တွေကိုအစီအစဉ်၏အများစုအပြင်သင့်ရဲ့ comment ကိုပေးတော်မူမည်) ရှိသည်သောသူတို့အဘို့။
လျှောက်လွှာ window ၏အောက်ခြေတွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်အထူးရှိပါတယ်။ button ကို "Analyze" ။ အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ပါ (။ ပုံ။2ကိုကြည့်ပါ)!
သင်္ဘောသဖန်း။ 2. အဆင့်မြင့် PC ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ထို့နောက်မိနစ်အနည်းငယ်ပရိုဂရမ်ကို (အကြောင်းကို 1-2 မိနစ်ပျမ်းမျှ။ ) သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။ စသည်တို့ကိုသင့် system အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, ဤအပူချိန်သည် (ကွဲပြားခြားနားသော device များအတွက် + အရေးပါအပူချိန်), အ disk ကိုသိုလှောငျ (ဝန်၏ဒီဂရီ) ၏အကဲဖြတ်: အဲဒီနောငျသညျဖွစျလိမျ့မညျသောအစီရင်ခံစာနှင့်အတူပေးသွားမှာပါ (- အင်္ဂလိပ်အစီရင်ခံစာ, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်ပင်ဆက်စပ်ထံမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသာအနုတ်လက္ခဏာ) ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 3. ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကွန်ပျူတာ (WhySoSlow အားသုံးသပ်ခြင်း) ၏အစီရင်ခံစာ
စကားမစပ် WhySoSlow အလွယ်တကူအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို (နှင့်၎င်း၏ key ကို parameters တွေကို) ခြေရာခံစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ် (ရိုးရိုး utility ကိုဖွင့်, ဒီလုပ်ဖို့ကနာရီကိုအနီးစနစ်ဗန်းထဲမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ပုံကိုကြည့်ပါ။ 4) ။ အဆိုပါဗန်း (WhySoSlow) ၏ utility ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ထိုပြဿနာကိုလေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင် - အဖြစ်မကြာမီကွန်ပျူတာအဖြစ်နှေးကွေးမှစတင်သည်။ အလျင်အမြန်ဘရိတ်များ၏အကြောင်းတရားများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်နားလည်ရန်အလွန်အသုံး!
သင်္ဘောသဖန်း။ 4. ဗန်းခရု - က Windows 10 ။
ထိုကဲ့သို့သော utility ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ developer များစုံလင်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ခဲ့ပါပြီမယ်လို့လျှင်, ငါထင်ပါကအလွန်သိသာခဲ့ပါတယ်တောင်းဆိုလိမ့်မယ်။ စသည်တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စောင့်ကြည့်မှု, အဘို့ Tools များ - ။ အခန်းထဲရောက်တော့အများကြီး, ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်များနှင့်ပြဿနာရှာ - အများကြီးလျော့နည်း ...